विचार « Sajhapath.com
नेपालमा हाल कोरोना भाईरसको दोश्रो भेरियन्टले पारिरहेको अस्तब्यस्त आम जनजिवन र राजनैतिक कर्मिहरुको कारण सिर्जित अस्थिर राजनितिक अबस्थाको बर्तमान परिपेक्षेमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको अवस्थमा राष्ट्रपतिद्वारा अद्ध्यादेश मार्फत प्रमाणित, नेपालको केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री श्री बिष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि आम्दानि र
आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो [बिचार]
डा. रामशरण महतपूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन। बजेट पनि काम चलाउन नै
देश कोरोनाले आक्रान्त छ । जनता दिनदिनै रोग र भोकले थलिने क्रम बढ्दै छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका केपी शर्मा ओली भने एकपछि अर्को संविधान मिच्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र
• शंकर पोखरेल लुम्विनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
• डाक्टर रवीन्द्र पाण्डे यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने, एकदम थकान
विजय हितान साहित्यका थुप्रै पाटाहरु छन्, त्यसमध्ये वातावरण साहित्य पनि एक हो । नेपाली साहित्यमा सामाजिक तथा राजनीतिकजस्ता मानवकेन्द्रित परिवेशका विषयवस्तुको मात्रै चर्चा गरेको पाइन्छ । तर वातावरण सम्बन्धीका कथावस्तुलाई
सन् २००८ को विश्व आर्थिक धरासायीको विकल्पमा अदृश्य व्यक्ति (संस्था) ले बिट्कोइन कोड (७ पेजको ह्वाइट पेपर) बनाएर केही व्यक्ति अनि संस्थाहरुलाई पठाएपछि बिस्तारै बिट्कोइनको सम्भावना र यो नै अब
शंकर पोखरेलएकताको रक्षाका लागि गरिएका प्रयासहरु किन असफल भए भनेर कमरेडहरु प्रश्‍न गर्नुहुन्छ । म कति कुरा बताउ भनेर अन्योलमा पर्छु । प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन पनि एकताको रक्षाका लागि म
दोलखाको कार्यक्रममा ‘आज जे देखेँ, यस्तो देखेँ…!’
राजेन्द्र मानन्धरकार्यक्रमको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म सबै कुर्चीहरु भरिएका थिए । अधिकांश कुर्चीहरुले कार्यक्रम अवधिमा कुनै नयाँ मान्छे बसाउन पाएन । एउटै व्यक्तिले कुर्ची ओगटेर हलचल नगरी नेताहरुका मन्तव्य श्रवण गरिरहे ।
विचारमा विकास नगरे प्रचण्ड-माधवहरु सर्वनाश हुन्छन् !
गोपाल किरातीदेशद्रोही, भ्रष्टाचारी, फासीवादी खड्ग ओलीलाई पार्टीबाट निस्काशन कारबाही गरेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुले एक कदम सही काम गरेका छन् । यद्यपि, यत्तिले नै उनीहरु क्रान्तिकारी चाहिँ भइहाल्दैनन्